Hay'adda WFP oo sheegtay inay gar gaar deg deg ah la gaarayaan dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen
Mogadishu Wednesday 27 July 2011 SMC
Hay'adda WFP oo maanta diyaarado mucaawino sida ka soo dejineysa magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka Ilaa toban diyaaradood oo ay leedahay Hay'adda WFP isla markaana sida shixnado gargaar ah ayaa la filayaa inay saakay ka soo degaan magaalada Muqdisho gobolada dalka, diyaaradahaasi oo ka soo kictimaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Sida ay sheegayaan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo naga soo gaaraya magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in saakay ay ka socoto qabanqaabo iyo diyaar garow diyaaradahaasi ay ugu kictimayaan dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood.
Dhinaca kale diyaaradaha u kireysan Hay'adda WFP ayaa iyagu duulimaadyadooda waxay ku sameynayaan goobaha ay ka taliso Dowladda KMG ah iyo xoogagga Ahlu Sunna Waljameeca ee magaalada Muqdisho iyo gobolada Koonfureed qaarkood.
Shixnadaha mucaawinooyinka ah ee diyaaradahaasi ay wadaan ayaa la sheegayaa inay ka kooban yihiin raashin, nafaqada caruurta, daawooyin iyo agab kale oo loogu talagalay dadka ay abaaraha ku habsadeen ee degan Koonfurta dalka Soomaaliya, kuwaasi oo gaajo iyo macluul darteed ugu geeriyoonaya goboladaasi.
Hay'adda WFP ayaa gargaarkaan ay diyaaradaha ugu daabuleyso gudaha dalka Soomaaliya waxa uu jawaab u yahay baaqyo iyo qeyla dhaan laga muujiyay xaaladda abaaraha ee ka jira Koonfurta dalka Soomaaliya inay ka sii darayaan hadaan si degdeg ah loogu gurman. Maxamuud Axmed Xasan